ब्याट्री जुन चल्छ र चलिरहन्छ र लामो समय सम्म रहन्छ ... | Androidsis
ब्याट्री जुन चल्छ र चलिरहन्छ र लामो समय सम्म रहन्छ ...
Zack | | ब्याट्री, मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा, अन्य उपकरणहरू
तपाईको स्मार्टफोनको ब्याट्री कति लामो हुन्छ? १२ घण्टा ... १ दिन मुश्किलले?
यति धेरै प्रयोग र उपयोगिताहरूको साथ शक्तिशाली स्मार्टफोन भएको एक कमजोरी भनेको ब्याट्रीको उच्च खपत हो। त्यसकारण अनलाइन स्टोरहरूमा हामी हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको लागि ठूलो संख्यामा वैकल्पिक ब्याट्रीहरू फेला पार्न सक्छौं। आज म ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्न आएँ जुन मैले पाएको उच्च क्षमताको साथ छ।
स्टोरको माध्यमबाट MyTrendyPhone.es हामी आश्चर्यजनक फेला पार्न सक्छौं ग्यालक्सी एस ब्याट्री केहि भन्दा बढि र केहि कम छैन 3000mAh। ग्यालेक्सी एसको साथ कारखानाबाट आउने ब्याट्री १1500०० एमएएच हो।
हामी एक उच्च-गुणवत्ता र उच्च क्षमताको ब्याट्री पाउँछौं। यो प्रतिस्थापन ब्याट्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र फ्याक्ट्री ब्याट्रीको रूपमा चार्ज गर्न सकिन्छ।
मैले सामान्य दैनिक प्रयोगलाई कारखानाको ब्याट्रीसँग र योसँग तुलना गरेको छु र मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि म खुशीले चकित भएँ। फ्याक्ट्री ब्याट्रीको साथ र यसलाई सामान्य प्रयोग दिदै: to जी समय-समयमा जडान गर्दै छ, तर प्राय: बन्द समय, वाइफाइ असक्षम, खेल र इन्टरनेटको बीचमा १ घण्टा प्रयोग, कलहरू, इत्यादि। १२ घण्टामा ब्याट्री २%% वा %०% मा छ। जे होस् यस 3000००० एमएएच ब्याट्रीको साथ १२ घण्टामा यसले me०% मात्र खपत गरेको छ। र त्यो गन्ती गरिरहेको छ कि मैले left जी छोड्दा सबै पटक र हरेक चोटि म उसलाई अनुप्रयोग स्थापना गर्ने काम गर्दैछु, फेसबुक, Google+, ब्रान्ड, इत्यादिको प्रयोग गरेर।
त्यसोभए यो ब्याट्री पूर्ण प्रयोगको लागि चार्ज नगरी दुई वा तीन दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्दछ।
ब्याट्री हाम्रो स्मार्टफोनको लागि यसको आफ्नै केसिंगको साथ आउँदछ किनकि यसको भौतिक आकार सामान्य ब्याट्रीको तुलनामा दुई गुणा मोटा हुन्छ। यो ब्याट्रीको साथ हाम्रो स्मार्टफोन एक बिट "मोटा" हुनेछ।
यसको बावजुद, मैले प्रदान गरेको ब्याट्री जीवनको तुलनामा मैले कुनै त्रुटि देखिन। हामी पनी फेला पार्दछौं कि यसको ठूलो मूल्य छ, मात्र। २..25.60०। निश्चित रूपमा एक उत्पादन अत्यधिक सिफारिश गरिएको सामानको ग्यालक्सी एस दायरा बाट।
नोट: (ब्याट्री सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एसको लागि हो र त्यो स्मार्टफोनमा परीक्षण गरिएको छ, यद्यपि यो अन्य स्मार्टफोन मोडेलहरूको लागि पनि उपलब्ध छ)।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » ब्याट्री » ब्याट्री जुन चल्छ र चलिरहन्छ र लामो समय सम्म रहन्छ ...
सब भन्दा धूर्त पृष्ठलाई प्रायोजित गर्ने केहि तरिका! साथै, त्यो मोबाइल बजारमा समाचारको लागि लामो समयदेखि आएको छ! जे भए पनि, तिनीहरूसँग g.nexus जस्ता नयाँ मोबाइल फोनहरूको लागि ब्याट्रीहरू छन् भने…।
लेखको अन्तमा नोट हेर्नुहोस्:
नोट: "ब्याट्री सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एसको लागि हो र त्यो स्मार्टफोनमा परीक्षण गरिएको छ, यद्यपि यो अन्य स्मार्टफोन मोडेलहरूको लागि पनि उपलब्ध छ।"
अझ धेरै, यो ब्याट्री नेक्सस एस को लागी उपलब्ध छ, सानो फरकको साथ यो २ 2800०० एमएएच छ।
Zack लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यसोभए यो एकै छैन, हो? यो उही निर्माता, वा उही श्रृंखला हुनेछ, तर उही होइन ...
RFOG लाई जवाफ दिनुहोस्
केवल नाइक भन्यो
तिमीलाई के चाहिन्छ? सयौं ब्याट्री राख्न तपाईंलाई सन्तुष्ट गर्न छोड्नुभयो? किन तपाईं पोष्ट गर्नुहुन्न यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन?
मेरो लागि यो सही सहकर्मीको लागि, ग्यालेक्सी एस २ आउँदैछ 😀 «मलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै शक्तिशाली व्यक्तिहरू छन्, तर यो मेरो पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ there र म त्यहाँ saw२०० मेगा जोड्नमा धेरै रुचि राख्छु 🙂
सरल नाइकलाई जवाफ दिनुहोस्
क्रिश्चियन रड्रिग्ज ब्यारोस भन्यो
होइन, यदि तपाइँले पढ्न रोक्नुभयो भने यो उस्तै हुँदैन "ब्याट्री सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एसको लागि हो र त्यो स्मार्टफोनमा परीक्षण गरिएको छ, जबकि यो अन्य स्मार्टफोन मोडेलहरूको लागि पनि उपलब्ध छ" भन्दा पनि "ब्याट्री एसजीएसको लागि हो र त्यो स्मार्टफोनमा परीक्षण गरिएको छ, जबकि अन्य स्मार्टफोन मोडेलहरूका लागि ब्याट्रीहरू पनि छन्।
यद्यपि यो तपाईलाई उस्तै लाग्छ, यो निकै नजिक छैन, उसले यो सोध्न सक्दछ किनकि यदि तपाईसँग घरमा S2 र S छ र यदि तपाई एक वा अन्यको लागि ब्याट्री प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने। (यद्यपि तर्कले तपाईंलाई विशेष कभरको कारणले भनेको छैन, तर हे)
र यसलाई माथि उठाउनको लागि, मलाई थाहा छैन यदि म यी मोबाइलहरूले लिने तापक्रममा विश्वास गर्न सक्दछु यदि तपाईंले तिनीहरूलाई थोडी दिनुहुन्छ भने, यदि 3000००० मेगा ब्याट्रीको साथ यो अझ माथि जान्छ विशेष गरी यसलाई चार्ज गर्दा।
मैले पढेको कुराबाट, धागोको सिर्जनाकर्तासँग यस प्रकारको ब्याट्री छ, हैन? तपाईं स्थिर र फुलचार्जमा तापमानको क्याप्चरहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
क्रिश्चियन रोड्रिग ब्यारोसलाई जवाफ दिनुहोस्
"यसले मलाई मात्र खान्छ"
यो केवल मलाई सेवन गरेको छ।
म केही समयको लागि मेरो ग्यालक्सी एस २ को उच्च क्षमताको ब्याट्रीमा रुचि राख्दै छु, तर मलाई थाहा छैन म एक हदसम्म अनधिकृत निर्माताको ब्याट्रीमा कसरी विश्वास गर्न सक्छु। मलाई सबैभन्दा प्रहार गर्ने एउटा आधिकारिक स्यामसंग २००० मेमा हो तर म यसलाई महँगो भने22000० मेमाको लागि स्टक एक भन्दा बढी पाएँ। भनिन्छ कि यो केवल २०% बढी ब्याट्री हो ... के गर्ने?
ब्लाकनाइटलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई यो वास्तवमै मनपर्‍यो र सबैभन्दा माथि म ब्याट्रीको जीवनबाट छक्क परें। यदि तपाईले आपत्ति जनाउनु हुन्न कि तपाईको फोन मोटो छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाई यस पृष्ठमा जानुहुन्छ र ब्याट्री हेर्नको लागी हेर्नुहोस् यदि यसले तपाईलाई विश्वास दिलाउँछ भने।
म मेरो एमबी 525२XNUMX को लागि चाहन्छु (मोटोरोला डेफि)
निर्देशनलाई जवाफ दिनुहोस्
TuPhoneShop। ब्ल्याकबेरी केस, हौसिings, संरक्षक, चार्जर, ब्याट्रीहरूका लागि सहायक उपकरणहरू।
हामीसँग एक्सेसरीज, ब्ल्याकबेरी, केसहरू, चार्जर, ब्याट्री, हेडफोन, केबुल, ह्यान्ड्स फ्री, ब्ल्याकबेरी केस, ब्ल्याकबेरी सामानहरू छन्।
सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा। सम्पूर्ण स्पेनमा शिपिंग। २ बर्षे WARRANTY का साथ उत्पादनहरु। हामी एक इनभ्वाइस प्रदान गर्दछौं। १००% मूल।
Tuphoneshop लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सोधेको छ, यो राम्रोसँग जान्छ कि भनेर जान्न 😀
B0nesniffer लाई जवाफ दिनुहोस्
Andrea Vasquez प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
के सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एसको ब्याट्री सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस २ सँग उपयुक्त छ?
Andrea Vasquez लाई जवाफ दिनुहोस्
यो राम्रो हुँदै गइरहेको छ यो सुनिश्चित गर्नु हो कि यो लामो समय सम्म रहन्छ र सामसु g ग्यालेक्सी ऐसको लागि गठित
JAJAJAJ लाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट मित्र तर तपाईलाई लाग्दैन कि यस तोपले त्यस्तो ब्याट्रीको लागि चार्जर खोज्छ? कारखानाको साथ यो लोड हुन को लागी hours घण्टा लाग्छ वा अधिक
Bassist लाई जवाफ दिनुहोस्
Angry Birds Season र ड्र्यागनको बर्ष
फोन मेमोरी भरियो? मेरो उपकरणको ती सबै MB / GB कहाँ गएका छन्?